Vodafone dia handidy ny SAC an-telefaony manomboka izao | Vaovao momba ny gadget
Vodafone dia handidy ny SAC an-telefaony manomboka izao
Iza no tsy niantso ny serivisy ho an'ny mpanjifa hamaha fanontaniana toy ny kaody PIN amin'ny karatra? Na mbola ratsy kokoa aza, rehefa miantso hangataka ny PUK ianao satria efa diso in-telo ny nampidirinao ny kaody PIN. Mazava ho azy fa tsy manome maimaimpoana amin'ny telefaona finday intsony izy io, ary izany no izy Vodafone dia nametraka ohatra fotsiny satria handoa vola amin'ny famahana ny tranga amin'ny telefaona izy, raha ireo tranga ireo dia tsy vokatry ny faharatsian'ny serivisy. Tsy vazivazy izany fa zava-misy mety handaniam-bola anao.
Mbola tsy notsapainay izany ary azontsika an-tsaina fa hanontany ny mpampiasa izy ireo alohan'ny hanaovana ny fandoavam-bola, saingy toa mahagaga anay izany farafaharatsiny. Manontania na inona na inona amin'ny alàlan'ny telefaona serivisy ho an'ny mpanjifa ao Vodafone (123), afaka mamela fanomezana ho anay ianao 2,50 euro amin'ny faktiora.
Andro vitsivitsy dia ananantsika ny vaovao avy amin'i El País iray amin'ireo mpandraharaha matanjaka indrindra eo amin'ny tsenam-pirenena handoa vola ianao amin'ireto karazana olana ireto, ary koa ny fanovana ny kaontin'ny banky, ny fanamarinana ny faharetana, ny fangatahana ny faktiora na koa ny fanovana ny adiresy faktiora. Izany rehetra izany dia handoa anao 2,50 euro raha manapa-kevitra ny hanao izany amin'ny telefaona ianao.
Marina fa mihabetsaka ny maro amintsika no tsy tafiditra amin'ny telefaona mandritra ny fotoana maharitra mba hangataka fanovana tsotra amin'ny fikirakirana, aleonay mankany amin'ny tranonkalan'ny orinasanay. Saingy toa tsy sahy amiko ny fiampangana an'izany amin'izao andro izao. Amin'izao fomba izao, tsy hahazo vola fotsiny izy ireo fa hampitahotra mivantana ireo mpampiasa tsy hiantso ny laharan'ny Serivisy ho an'ny mpanjifa, noho izany dia mila mpandraharaha vitsy kokoa izy ireo ary manangona amin'ny fomba roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Vodafone dia handidy ny SAC an-telefaony manomboka izao
Tsy haiko raha mifanaraka ny isany, na eo aza izany dia maro ny tranga antso amin'ny SAC izay tsy misy dikany, ary raha fintinina dia mavesatra izy ireo. Andrasana izany. Saingy, azo antoka fa hanome singa hafa amin'ny fitantanana tena izy ireo ary angamba hampiova antsika fahazarana sasany izany.
Ny Motorola Moto G5 Plus dia hita amin'ity famoahana ity
Ny LG Watch Style sy LG Watch Sport izao dia ofisialy